गृहपृष्ठ » कर्पोरेट » प्रोपर्टी » नेपालकै सबैभन्दा महँगो ७४ लाखको बाइक किन्ने यी युवा को हुन ?
बिहिबार १९ भदौ, २०७६
काठमाडौं । सुन्दापनि अचम्म लाग्न सक्छ । एउटै बाईक ७४ लाख हालेर किन्न व्यक्तिपनि नेपालमा नै छन् । नेपाली नै हुन् । राजधानीमा हालै सम्पन्न नाडा अटो शोमा प्रदर्शनीमा राखिएको सबैभन्दा महँगो मोटरसाइकल बिक्री भयो । जसको मुल्य थियो ७४ लाख । अब यो बाईक कसले किन्यो होला ? सबैको मनमा उब्जिने प्रश्न नै हो । ’
किनकी कम्पनीले बिक्री भएको सूचना त दियो तर खरिद गर्नेको नाम उल्लेख भने गरेन वा गर्न चाहेन । ती खरिदकर्तालाई तत्कालै भाइरल हुनु थिएन, सायद । एमभी अगस्टाको लागि नेपालको आधिकारिक वितरक भेलोसिटी प्रालिले नाडा अटो शोमा सार्वजनिक गरेको लेविस ह्यामील्टनको ७३ लाख ९० हजार रुपैयाँ मूल्य रहेको बाइक थियो त्यो ।
एमभी अगस्टा ब्रुटेल ८०० आरआर एलएच ४४ लिमिटेड एडिसन बाइक संसारभर मात्रै १ सय ४४ युनिट मात्र निर्माण गरिएको छ । जसमध्ये दक्षिण एसियामै आएको यो एकमात्र एक युनिट थियो । मोटरसाइकल नाडा अटो शोमा प्रदर्शन गरियो ।
७४ लाखको मोटरसाइकल किन्ने अरु कोही नभएर सौरभ ज्योति हुन् । धनाढ्य ज्योति परिवारका सौरभ सवारीसाधनका सौखिन हुन्, विशेष गरी मोटरसाइकलको । १४ वर्षकै उमेरमा उनले मोटर साइकल चलाउन सिकेका थिए । त्यसबेला होण्डाको सिडी र बेन्ट्ली मोडल थिए । ज्योति ग्रुप आफैमा होण्डको आधिकारी बिक्रेता हो । उनले हज्जारौँ हजार बाईक, स्कुटर बेचिसकेका छन् ।